प्रदेश र स्थानीय तहको संगठनका चुनाव लगायतका कामहरुमा संघीयताको उपस्थिति स्पष्टछ । अव यो अवस्थामा विकासको बाटो कसरी विस्तारगर्ने हो ? केरुङको रेल काठमाडौं कसरी ल्याउने हो ? भोलि कदाचित दक्षिणले नाकावन्दी गर्यो भने उत्तरलाई सहज आवागमनकोे अवस्थामा ल्याउन के के गर्नुपर्ने हो ? यी प्रश्नहरु मार्जिनमा नै रहेकाछन । अव प्रधानमन्त्रीले रारा तालबाट देशवासीलाई सम्वोधनगर्दा विकासलाई कसरी निर्देशित गर्नेछन ? त्यसपछि मात्र विकास वहस सार्थक हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मुगु जिल्लामा अवस्थित नेपालको सुप्रसिध्द रारा तालबाट देशवासीको नाममा वक्तव्यदिंदै वर्ष २०७५ को स्वागत गरे । प्रधानमन्त्रीको भाषणसंगै नेपालको राजनीतिक परिवेशमानयाँ ढंगले परिवर्तन आएको महसूस गरे धेरैले । छनपनि एमालेका नेताहरु अन्य दलका नेताहरुको तुलनामा कल्पनाशील छन । उहिले माधव नेपालजीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नजीकको काला पत्थरमा मन्त्रीमण्डलको वैठक वसालेका थिए । अहिले प्रम ओलीले नयाँ वर्षको स्वागतमा त्यो भन्दा पनि कल्पनाशील कामगरेका छन । पछिल्लो भारतीय नाकावन्दीपछिको समयमा नेपालीहरु जुम्ला, रारा, मान–सरोवर, मुस्ताङ, मनाङ, लगायतका आवागमनका लागि कठिन मानिने क्षेत्रको भ्रमणमा जाने गरेका छन । यसबाट अलिकति देशप्रतिको आत्मानुभूति जागृत हुन्छ भने हामी कुन भौगोलिक जटिलतामा जेलिएका छौं ? भन्ने थाह पाइन्छ । नेताहरुलाई हवाइजहाज वा हेलिजहाजमा भन्दा मोटरको कठिन बाटो लैजान सके कार्यक्रम अझै जम्नेछ ।संविधान सभाको दोस्रो चुनावसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को कट्टर प्रतिस्पध्र्दी भएकोमाओवादीसंग संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि एमालेले अचानकको रणनीतिक र राजनीतिक सत्ता संयोजन गरेको थियो । नेपाली राजनीतिको स्वभाव यथास्थितिमा अडिने खालको छैन । त्यतिवेलाको अवस्थामा पनि यो टिकेन । यद्यपि, माओवादी विद्रोहका प्रणेता तथा जन–युध्दका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफनो पार्टीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर नेपाली राजनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन नखोजेका पक्कै होइनन । अहिले पनि, जनयुध्द कालमा मारिएका सरकारका सुरक्षाकर्मी, माओवादी कार्यकर्ता सर्वसाधारण नेपालीको ज्यानको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई नै दिइन्छ । उनका अगाडि माओवादीका ठूलठूला नेता टिक्न नसकेको त देखिएकै छ । माओवादी जनयुध्दको अन्त्य मूल रुपले कांग्रेस पार्टी र यसका स्वर्गीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा प्रचण्डवीचको राजनीतिक सहमतिका कारण भएको थियो । दुइ नेताका वीच के सहमति भएको थियो? यो कसैले भन्न सक्दैन । तर, कांग्रेससंग माओवादीको मित्रताको गाँठो कसिन सकेन । यसको कारण कांग्रेसभित्र र वाहिरका वुध्दिजीवीहरुलाई राम्ररी थाह छ । त्यतिवेला कांग्रेस, माओवादी र अरु सवै राजनीतिक दलहरुले गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग ।।।धर्म पन्जिका’को लेनदेन गरेको भए शान्ति र सुव्यवस्थाको स्थापना हुन यति लामो समय कुर्नुपर्ने थिएन । यति लामो संक्रमणपछि प्रचण्ड अहिले यो कुरामा सहमत देखिन्छन । उनले पटक पटक र ठाउँठाउँमा यो कुरा दोहोर्याएका छन । दोस्रो चुनावपछि माओवादी र एमाले मिलेर सरकार वनाए । दुवै पार्टीवीच सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादीका अध्यक्षले पालैपालोगर्ने सहमति भएको थियो । यही वेला भू–राजनीतिले माओवादीलाई दख्खल दियो । एमालेको अहंकार अलिकति वढ्यो भन्दा पनि प्र.म.ओलीको स्वर अलिकति तीखो सुनियो । यही अवसर छोपेर कांग्रेसका नेताहरुले माओवादीसंग मिलेर सरकार चलाउने वार्ता गरे । पहिलो पटकको वार्ता सफल भएन । दोस्रो चरणको वार्तापछि प्रचण्ड कांग्रेस–माओवादी सरकारका प्रधानमन्त्री भए भने कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे ।पछिल्लो पटक त्यसवेला नेपाली कांग्रेससंग प्रचण्डको मोहभंग भयो जतिवेला उनले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंगको गठवन्धन राजनीतिक हिसावले सुपाच्य नभएको ठहर्याए । पहिलो संविधान सभाको परिणाम र त्यसको सन्देश वुझेर शक्ति र सत्ताको राजनीतिक मोहलाई धान्न सकेको भए सम्भवतःअहिलेसम्म प्रचण्ड दक्षिण एशियाका प्रमुख कम्युनिष्ट नेता वनी सक्ने थिए होलान । तर, त्यतिवेला उनले दुःखको त्यो बाटो चुन्न चाहेनन । त्यो बाटो धानेर कांग्रेससंग सहकार्य गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने पनि थिएन । अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सवै पक्ष र नेताहरु एउटै लय र तरंगमा हिंडेको देखिएको छ । गणेश साहदेखि चित्रवहादुर के.सी.सम्म र आपूmलाई प्रचण्डका दुश्मन वताउने वैद्य र विप्लव समेत माओवादी केन्द्रमा घुस्ने छिद्रको खोजमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाली कम्युनिष्टहरुको यो गुण हो कि दोष हो ? कसैले वताउन सक्दैन ।यतिवेला २०७४ को वयानगर्ने समय होइन । न त यो समयलाई साधारण समयका रुपमा लिन मिल्ने अवस्था नै छ । देशका दुइ ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी एक भएका छन । लामो समयदेखि सत्ता र प्रतिपक्षको रुपमा आफनो दह«ो उपस्थिति राख्दै आएको नेपाली कांग्रेस तेस्रो पार्टी भएकोछ । देशमा संघीय शासन लागु भै सकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संगठनका चुनाव लगायतका कामहरुमा संघीयताको उपस्थिति स्पष्टछ । अव यो अवस्थामा विकासको बाटो कसरी विस्तारगर्ने हो ? केरुङको रेल काठमाडौं कसरी ल्याउने हो ? भोलि कदाचित दक्षिणले नाकावन्दी गर्यो भने उत्तरलाई सहज आवागमनकोे अवस्थामा ल्याउन के के गर्नुपर्ने हो ? यी प्रश्नहरु मार्जिनमा नै रहेकाछन । अव प्रधानमन्त्रीले रारा तालबाट देशवासीलाई सम्वोधनगर्दा विकासलाई कसरी निर्देशित गर्नेछन ? त्यसपछि मात्र विकास वहस सार्थक हुनेछ ।प्रम ओलीका सिपसालाहारहरुले अत्यन्त संगठितहिसावले २०७५ सालमा गठन भएको वामपन्थी सरकारले नेपालको कायाकल्पगर्ने प्रचारगर्दै आएका छन । कम्युनिष्ट राजनीतिमा प्रचारको ठूलो महत्व छ । अहिले टाँसिएका एमाले र माओवादी दुवै पार्टी अहिंसात्मक होइनन । यी पार्टी शक्ति र सत्ताका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार देखिन्छन । यिनीहरुसंगको पावर बार्गेनमा मजा आउने भएर हो वा अरु कुनै कारणले हो, राष्ट्रिय जनता पार्टीपनि नजीक हुने लक्षण देखिएको छ । लक्षणले पूर्णता पाइ सकेको छैन । मधेशका नेताहरुले दुइ नम्वरमा हामीले जित्यौं, अव अरु नम्वरमा पनि जित्नु पर्दछ भन्ने सोचे भने त्यसको परिणाम उल्टो आउने त निश्चित नै छ ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकासका लागि पार्टीहरुले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएका छन । तर, हामीसंग समावेशी, संघीय र गरिवी विरुध्दका ठोस कार्यक्रम नै छैनन । हामी ठूलो र चिप्लो कुरा गर्दछौ । तर, ती कुराहरु परिणाममुखी हुँदैनन । हामीले अहिलेसम्म पूरै देशको अन्न भण्डारका रुपमा गर्वगर्दै आएको दुइ नम्वर क्षेत्रको दुरावस्थामात्रै हेर्ने हो भने पनि अवस्था गतिलो छैन । संघीयतामा एकता र जनताको संप्रभूतालाई सम्मानगर्ने समाजमा मात्र मानिसको विकास हुन्छ । विकास विकास भनेर कराउँदैमा विकास हुने भए अहिलेसम्म हामीले त्यो वाहेक अरु कुनै काम गरेका छैनौ ।